Voasambotr’i Meksika Indray i El Chapo Guzmán. Nefa Iraka Tontosa Ve Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2016 3:19 GMT
Sary nozaraina tao amin'ny media sosialy, lazaina fa i Chapo Guzmán taorian'ny nahasamborana azy.
Fanintelony izao, voasambotr'ireo Meksikàna manampahefana ny iray tamin'ireo mpikirakira zavamahadomelina tena nokarohina fatratra, no sady lehilahy matanjaka eto amin'izao tontolo izao : Joaquín Guzmán Loera, antsoina hoe ‘El Chapo’. Guzman Loera dia voampanga aminà raharaha heloka bevava nasiam-panomanana, heloka bevava manohintohina ny fahasalamàm-bahoaka ary vono olona marobe.
Tao Los Mochis no niseho ny fisamborana, tanàna iray amorontsiraka ao anatin'ny fanjakàny ao Sinaloa, taorian'ny fifampitifirana nifanaovana tamin'ireo Marines Meksikàna izay nilaza fa nahafaty dimy tamin'ireo olona mitam-piadiana sy naharatràna manamboninahitra iray.
Nisy fandefasana bala afomanga, fitaovam-piadiana sy fiara mifono vy iray nogiazana.
Roa raha kely ny Marines Meksikana no maty tamin'ireo fifandonana tamin'ny olon'i El Chapo hatramin'ny fiandohan'ny 2016, raha marobe tsy voaisa kosa ireo aina nafoy tamin'ny “ady amin'ny zavamahadomelina” tao amin'ny firenena tato anatin'ny taona vitsy.
Ny 11 Jolay, tamin'ny alàlan'ny tonelina mirefy 1,5 km avy tao amin'ny trano fidiovany no nanaovan'i El Chapo ny fandosirany fanindroany ny fonja.
Tamin'ny 2001, avy ao amin'ny fonjan'i Puente Grande ny fandosirany voalohany, izay noeritreretina ho tanaty fitaterana lamba hosasàna.
Tao amin'ny kaonty ofisialiny Twitter ilay fisamborana no nambaran'i Enrique Peña Nieto, filoha Meksikana, izay nisedra olana goavana tokoa ny fitokisana azy taorian'ny fandosirana vao haingana nataon'ity mpanjakan'ny zavamahadomelina ity.
Iraka tontosa: azonay izy. Tiako ny mampahafantatra ny Meksikana rehetra fa voasambotra i Joaquín Guzmán Loera.
Angatahan'i Etazonia ny hanolorana azy an'i Guzman Loera noho ny varotra an-tsokosoko “cocaine, heroin sy methamphetamines nataony.
Loka 5 tapitrisa dolara mihitsy aza no natolotr'i Washington ho an'izay manome vaovao mitondra ho amin'ny fahasamborana azy, manindry ilay 3,8 tapitrisa dolara efa naroson'ny governemanta Meksikàna.
Tamin'ny Sabotsy 9 Septambra, nanao fanambaràna iray ny biraon'ny fampanoavana Meksikàna fa raha vao voasambotra indray i Guzman dia “efa tokony hanomboka ny dingana handefasana azy [ho any Etazonia].”
Mandritra izany fotoana izany, nohamafisin'ny mpitondra tenin'ny Masoivoho Amerikàna miady amin'ny Zavamahadomelina, Lawerence Payne, fa “andro lehibe ho an'ny fitsaràna sy ireo tanjon'i Meksika sy Etazonia io”.
Tena faly tanteraka ny DEA tamin'ny fahasamborana an'i Chapo Guzman. Miarahaba ny governemanta Meksikàna izahay ary mipao-tstroka amin'ny fahasahiana nandritra ny fisamborana azy
Fahatanterahana manan-danja amin'ny ady iraisantsika atao amin'ny heloka bevava nasiam-piomanana, ny herisetra ary ny fanondranana zavamahadomelina ilay fisamborana
Malcom Beith, mpanao gazety iray nanoratra boky momba ireo mpanjakan'ny zavamahadomelina, nilaza tamin'ny USA Today hoe:
Ny fahasamborana indray an'i Chapo amin'izao dia manome an'i Meksika fotoana iray goavana fanararaotra mba hitsaràna azy malaky sy an-drariny ary hiantohana fa raha voaporofo ny fanamelohana azy dia hijanona any ambadiky ny fefy vy ranamana – na handefa azy ho any Etazonia ka hanaporofo fa matanjaka hatrany ny fifandraisan'i Meksika sy Etazonia.
Don Winslow, mpanoratra ny El Cartel, dia namoaka andiany maromaro amin'ireo bitsika, narahan'ny famintinany momba ilay fisamborana:
Efa imbetska namerina nilaza ny lehiben'ny fampanoavana ao Meksika fa tsy ho alefa any Etazonia i El Chapo. Mino azy aho. Tahaka ny ampahany tamin'ny fifanarahana nifanaovana taminy.
Ny filazàn'ny Filoha Enrique Pena Nieto hoe “iraka tontosa” dia azo itokiana ho toy ny filazàn'i George Bush azy momba an'i Iràka. Samy kidaladala
El Chapo: 1 Rava ny fifanarahana iray. 2 Fampisehoana ihany ny “bemidina” (toy ilay tonelina) 3 Fitolorantena & tsy fandefasana ho any Etazonia. Ho toy ny hotely ny fonja ao Mex
Raha raisina ny hoe fanintelony izao i El Chapo no voasambotra, marobe ireo efa miandry ny fiverenan'ireo fandosirany fonja toy ny taloha.
El Chapo rahampitso…
Ao amin'ny Facebook, Juan Herroz nanondro ilay hadisoana mahamenatra tsy ela akory vitan'i Steve Harvey, ilay mpilaza izay nandresy tamin'ny Miss Universe, nanome tsy nahy ho an'ny Miss Kôlômbia ny satro-boninahitra talohan'ny nanitsiany ny tenany ka nanomezany izany ho an'ny Miss Philippines.
Azon-dry zareo i El Chapo. Azafady, nandositra i El Chapo.
ny mety ho endrik'i El Chapo
Tratra androany i El Chapo. Dia handositra izy ny:
Nisy ihany koa ireo hafa izay nanontany tena hoe naninona ity fahatapahankevitry ny manampahefana hisambotra indray an'i El Chapo ity no tsy hita tamin'ireo heloka bevava hafa, isan'ireny ny fakàna ankeriny ireo mpianatra avy amin'ilay Kolejy Fiofanana ho Mpampianatra any ambanivohitr'i Ayotzinapa tamin'ny 2014.
Vitan'ny governemanta Meksikana ny misambotra an'i El Chapo, fa tsy mbola vitan'izy ireo ny mahita ireo mpianatra 43 nanjavona tao Ayotzinapa
Tsy mainkina amin'izay ho aloaky ny ampitso ho an'i El Chapo, namela takaitra ho an'ireo tsy naniry izany ny fahasamborana azy indray farany teo, isan'izany ireo olona 600 nafindra toerana taorian'ny hazalambo nataon'ny Marines Meksikàna tao amin'ilay faritra.